Askeri ka warramaya dagaalkii Mau-Mau - BBC Somali - Warar
Askeri ka warramaya dagaalkii Mau-Mau
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 7 June, 2013, 13:58 GMT 16:58 SGA
Kacdoonkii xornimodoonka qowmiyadda Mau-Mau kala hortagtay ciidankii boqortooyada Ingiriiska ee xukumayay dalka Kenya 1950-yaddii.
Dad ka tirsan qowmiyadda Mau_mau
Dowladda Britain ayaa oggolaatay inay madhow siiso qoysas ehelkooda ay waxyeello ka soo gaartay dagaalladii xilligii gumeysiga ka dhacay dalka Kenya. Jabhaddii la oran jiray Mau-Mau dadkii u dagaallamay ehelkooda iyo asaxaabtooda waxaa la siinayaa lacago magdhow ah.
Ciidankii Ingiriiska ee berigaasi la dagaallamay Jabhaddii Mau-Mau waxaa ka mid ahaa Xaaji Muxumed Shiil Cabdille oo hadda deggan magaalada Gaarisa ee gobolka woqooyi bari Kenya.
Xaaji Muxumed wuxuu ka warramayaa berigii uu ciidanka Ingiriiska ka midka ahaa iyo qaabkii ay ula dagaallameen jabhaddii Mau-Mau-ga.